I-Apple ihambisa ishishini iTunes ukusuka eLuxembourg ukuya e-Ireland | IPhone iindaba
I-Apple ihambisa ishishini iTunes ukusuka eLuxembourg ukuya eIreland
Siyaqhubeka nengxabano phakathi kweApple kunye namashishini ayo kwi-European Union, kwaye kukuba ngokolwazi lwamva nje, Inkampani yaseCupertino ithathe isigqibo sokufudusa i-iTunes yeshishini kunye neenkqubo zolawulo ziye eYurophu zisuka eLuxembourg, ukuya eIreland. Sicinga ukuba njengezinye iinkampani, zikhona eLuxembourg njengeenkampani ngezizathu zerhafu. Nangona kunjalo, akahambi kwindawo enempikiswano, uya eIreland kwinkqubo yesohlwayo kunye nophando ngenxa yeerhafu "izibonelelo" iApple ebizifumana iminyaka kuRhulumente waseIreland.
Yonke into ibonisa ukuba lo mbandela awuyi kuyeka ukuba nempikiswano ixesha elide, kwaye ungaphantsi ngoku. Okokuqala, iApple ihambisa zonke iiakhawunti zonjiniyela, ixabisa malunga ne-9.000 yezigidigidi zeedola, ngokuthe ngqo ukusuka eLuxembourg ukuya eIreland. Olu tshintsho ngokuqinisekileyo luya kwenzeka ngoFebruwari 5.
Okwangoku kumoya wempikiswano njengoko iApple ifumene isicelo kwiKhomishini yaseYurophu inyanzelisa ukuba ihlawule hayi ngaphantsi $ 14.500 yezigidigidi kwiirhafuKonke oku kungenxa yonyango olwahlukileyo ebelufunyanwa yinkampani iCupertino eIreland, apho ihlawule ipesenti ehlekisayo xa kuthelekiswa nezinye iinkampani ezikwicandelo elinye. Kodwa siyakhumbula ukuba oku akuphelelanga kwi-Apple kuphela, abanye abafana noGoogle bakwilizwe lethamsanqa ngenxa yezi zizathu.
Ekugqibeleni, amashishini eTunes aya eCork ngexesha okanye kwiinyanga ezimbalwa ezizayo, ukusuka apho iApple iyakusebenza kumazwe angaphantsi kwe-100, ulwazi lokusingatha kwi-iTunes, iBooks, Apple Music kunye neVenkile ye App Zombini iOS kunye neMacOS. Asazi ukuba oku kuyakongeza ngaphezulu okanye kancinci amafutha kumlilo ngokwamanqanaba ahlawulwa yiApple eIreland, kodwa linyathelo elinomdla lokuthetha okuncinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple ihambisa ishishini iTunes ukusuka eLuxembourg ukuya eIreland
I-Apple HomeKit kunye neAmazon Alexa, umahluko kukhuseleko
Canopy: Ezona mveliso zintle zeAmazon, ezikhethwe ngesandla